Mitaky Ny Hampitsaharana Ny Fijaliana Ao Amin’ny Sisintanin’i Rafah i Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2013 2:48 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, Français, Italiano, English
Tanteraka ny nofy ary vaky teo amin'ny fiampitana sisintanin'i Rafah, eo anelanelan'i Ejipta sy Gaza, ary Palestina, izay nakaton’ny manampahefana Ejipsiana taorian'ny fionganan'ny filoha teo aloha Mohammed Morsi. Vokatr'izany fanakatonana izany, tsy afaka mandeha any ivelany any amin'ny oniversiteny ivelan'i Gaza ireo mpianatra Palestiniana, ka mijanona mihitsoka ao amin'ny sisintanin'i Rafah, izay sisintany voalohany ho an'ireo Palestiniana 1,7 tapitrisa ao Gaza noho ny fahirano ataon'i Israely.
Tamin'ny Alarobia (18 Septambra), nikarakara sit-in ny vondrona mpianatra palestiniana, mitaky ny hanokafana ny sisintany mba ahafahan'izy ireo manatrika lesona sy fanadinana mbola tsy natrehina. Mbola maro ireo mihitsoka ao amin'ny sisintany.
Anisan'izany i Shahd Abu Salamah, izay nibilaogy ny fijaliany. Hoy i Abu Salamah, mianatra any Tiorka nisioka:
Manana diplaoma literatiora anglisy tao amin'ny Oniveriste Islamika ao Gaza i Malaka Mohammed. Mbola mianatra izy ankehitriny ary haka diplaoma master momba ny politika sy lalàna iraisam-pirenena ao amin'ny Oniversiten'i Sheffield ao Angletera. Zarainy ao amin'ny Electronic Intifada ny tantarany:
Nanao fanangonan-tsonia tao amin'i Avaaz ireo mpikatroka mba hitaky ny fanokafana ny sisintany. Nahangona sonia teo amin'ny 6000 teo ny fitakiana tao anatin'ny telo andro voalohany.